Alshabaab oo Degmada Ceel Buur ku toogtay Shaqsi Caan ah | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Alshabaab oo Degmada Ceel Buur ku toogtay Shaqsi Caan ah
Alshabaab oo Degmada Ceel Buur ku toogtay Shaqsi Caan ah
Xarakada Al Shabaab ayaa fagaare kuyaala degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud waxa ay ku toogteen nin lagu eedeeyay in bishii ramadaan gudaha degmadaasi dil ugu geestay nin kale oo dadka deegaanka kamid ahaa.
Maxkamada Al Shabaab ee gobolka Galgaduud ayaa xukun dil ah ku riday Maxamed Jiinoow Jimcaale oo gudaha degmada Ceelbuur ku dilay nin lagu magacaabi jiray Cabdullaahi Daahir Cali.
Ehelada marxuunka uu dilay Maxamed Jiinow ayaa maxkamada ka codsaday in xukun dil ah loogu fuliyo gacan ku dhiiglaha, waxaana la sheegay in ehelada ninka horey loo dilay ay diideen in ay qaataan Diyo.
Fagaaraha xukunka dilka ah lagula fulinayay ninkan dilka geestay ayaa waxaa isugu soo baxay qaar badan oo kamid ah shacabka ku dhaqan degmada Ceelbuur iyo sidoo kale dagaalyahano iyo saraakiil katirsan Al Shabaab.
Previous articleGar gaar deg deg ah oo loowado magaalada Cadaado ee maamulka Galmudug
Next articleGudoomiyahii hore ee Baarlamaanka Jawaari oo 2017 ka Digay in Doorasha uusan qabaneynin Madaxweyne Farmaajo
Warbixin laga qoray Forex.
Shirka magalaada Dhuusamareeb oo saacadaha Soo socda Furmayo